Dhacdooyinka Soo Socda - Dunida Maarso
Ma jiraan munaasabado la qorsheeyay.
Goob raadinta iyo Muuqaalka Dhacdooyinka
Gali erayga furaha. Ka raadi dhacdooyinka erayga furaha.
Joogitaanka aragtiyada dhacdada
sida hadda ah	sida hadda ah
Mar	8	2020
8 Maarso 2020 @ 12: 00-22: 00 CET
Hawlaha xiritaanka Maarso 2aad ee Adduunka ee Madrid - 8 Maarso 2020
12-kii saac ee Km 0: Calaamadda xiritaanka astaanta dalxiiska adduunka ee 2-da Maarso 5 bilood kadib markay ka baxday isla isla meeshaas. 12:30 pm Fiidnimo Puerta del Sol oo ku taal Mallorcan horteeda: Gaaritaanka sumadda aadanaha ee Nabadda iyo Rabshado aan lala dhaqmin haweenka dhaqamada kaladuwan.
8 Maarso 2020 @ 08: 00-23: 30 CET
SAAMAYNTA NABADGELYADA iyo NOVIOLENCE, Coruña
# lola.saavedra.pintora #amarchacoruna #WorldMarch Farshaxanka caaga ah ee Coruña Lola Saavedra waxay iskaashi la sameyneysaa farshaxankeeda "2-da Maarso Adduunka ee Nabadda iyo Rabshadaha" Waxaad ku raaxeysan kartaa shaqooyinkiisa oo lagu muujiyey aaladda "SPAZO" illaa dhamaadka Janaayo 2020 ee Avda.
7 Maarso 2020 @ 18: 30-22: 00 CET
Xiritaanka 2-dii Maarso-Madrid (Casa Árabe) - Maarso 7, 2020
18.30-da fiidnimo Xiritaanka xafladda ee Maarso iyada oo la saadaalinayo sawirada wadada, wax ka qabadka ay sameeyeen mudaaharaadyo ka kala yimid qaaradaha kala duwan, erayo xirxiran iyo taabasho muusig. Goobta: Hanti Dhawrka Casa Árabe ee Calle de Alcalá, 62, 28009 Madrid http://www.casaarabe.es/